Inspire Your Mind – Page2– 𝐀𝐫𝐢𝐞𝐥'𝐬 𝐒𝐭𝐲𝐥𝐞
4 months ago Carlos Moore
Moschino ရဲ့ creative director ဖြစ်တဲ့ (Jeremy Scott) ကနွေဦးရာသီဒစ်ဂျစ်တယ်ဖက်ရှင်ပြပွဲမှာ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတစ်ခုကို ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ အဓိကအချက်ကတော့ ဒီနှစ်အတွင်းမှာ cov-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်လူစုလူဝေးမလုပ်နိုင်တာပါဘဲ။ ဒါကြောင့်…
ဒီနေ့ ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ Dolce & Gabbana ရဲ့ Spring Summer 2021 အမျိုးသမီးဝတ် ဖက်ရှင်ရှိုးပွဲမှာ ပြသခဲ့တဲ့ Patchwork collection…
Hello… စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ Ariel’s Be Chic Be Unique ဆိုတဲ့ Blog ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းများကို ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာ Character နဲ့…
Sustainable Fashion 2. Organic Cotton 3. Recycled Materials 4. Botanical Dyes 5. Compostable Packaging PANGAIA…
5 months ago YAMIN
ဒီနေ့ ပြောပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာလေးကတော့ စိတ်ပြေလက်ပျောက် ကြည်ရှုသင့်တဲ့ lifestyle YouTube channel လေး (၄) ခုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Covid 19 pandemic ကြောင့်အကုန်လုံးအိမ်ထဲမှာပဲနေနေရတော့…